Anim na E-mail na-arụ ọrụ n'ezie? | Martech Zone
I nwere 30 sekọnd iji jide uche ndị na - agụ akwụkwọ gị ozugbo ha pịa email gị. O doro anya na nke a bụ obere windo. Ọ bụrụ na ị dị ka m, mgbe ahụ ị nwere ike iche nke ahụ -aga aga dị ntakịrị ihe ize ndụ iji jiri ahịa email, mana ịchọrọ ịdọta uche ndị nnata gị. Ya mere, gịnị ka ị na-eme?
Otú ọ dị, mgbe ị gafere ahịa email anyị nkwado nke onye nkwado, nke a nwere ike ịbụ ọmarịcha ngwaọrụ maka ndị na-ere ahịa email ma ọ bụrụ na etinyere ya nke ọma.
Ọbụghị naanị na animation bụ nnukwu ụzọ iji dọta uche ndị na - agụ ya, mana ọ na - enyekwa ndị na - ere ahịa ohere ịbịaru ọtụtụ ngwaahịa, onyinye, ma ọ bụ ịkpọ oku na omume. Ikwesighi ikwe ka animation a metụta ịnapụta gị. Debe obere ihe eserese, debe GIF ahụ eserese naanị na okpokolo agba 6, ma gbaa mbọ hụ na igbe izizi gbachiri ozi ahụ (ọ bụrụ na enwere otu) ka ozi ịntanetị gị ghara inwe nsogbu ọ bụla ị ga-enweta na folda Spam.
Maka ndụmọdụ ndị ọzọ maka imepụta na inyefe ihe eserese na email gị, lelee Delivra Animation na E-mail: Otu esi etinye aka na usoro a kacha ọhụrụ.
Tags: AnimationỌdịnaya Emailemail Marketingdebanyere ahaAkwụkwọ edemede